Amabhoni kashokoledi we-almond kanye nomnyama | Ikhishi Recipes
UMaria vazquez | 18/12/2021 10:00 | Ama-Postres
Kunama-dessert alula esingawenza ekhaya ukuze siqedele ukudla kwethu kwasemini nedina kulo Khisimuzi. Lezi amabhoni e-almond kanye noshokoledi omnyama ziyindlela ehlukile yayo. Ukhilimu ngaphandle, ukhilimu ngaphakathi ... ubani ongamelana nawo?
Ukuzilungiselela kulula kakhuluNakuba uma uwenza ngobuningi bazo uzokujabulisa okwesikhashana. Ngeke uzisole ngokuzilungiselela nakuba engakuqinisekisa ukuthi zizohlala etafuleni ngaphansi kakhulu kunalokho okukuthathe ukuzilungiselela. Abangaphezu kokukodwa nababili bazocela iresiphi. Ngoba ubani ongathandi oshokoledi?
Laba akuwona oshokoledi bendabuko. Alungiswa ngenhlama ephakathi kwezithako zayo eziyinhloko Ukhilimu we-almond, i-cocoa ehlanzekile nezinsuku. Ngakho-ke, iresiphi enempilo kakhulu kuneyendabuko. Ingabe uyalokotha ukukulungisa? Mhlawumbe ukubona igxathu negxathu elilula kuzokukhuthaza ukuthi wenze njalo ngoba izithombe azibenzi ubulungiswa.
Lawa mabhonbhoni kashokoledi we-almond amnyama anengaphandle elishwabene nengaphakathi elicwebezelayo. Iphelele ukuvala noma yimuphi umkhosi.
200 g ukhilimu we-almond
2 wezipuni ushukela wokhilimu
I-10 g ye-cocoa powder ehlutshiwe
Izinsuku eziyisi-7 ezihlanganisiwe.
30 g. ama-alimondi athosiwe
10 amantongomane (uyazikhethela)
100 g ka-85% ushokoledi omnyama.
Sibeka izinsuku zokucwilisa emanzini ashisayo imizuzu eyi-30.
Isikhathi sihambile, sichoboza engilazini ye-blender ukhilimu we-alimondi, impushana kakhokho, ushukela kanye nezinsuku eziyisithupha kuze kube yilapho kwakheka ingxube ewugqinsi esingakwazi ukuyiphatha. Ingabe isathambile kakhulu? Engeza idethi eyodwa ngaphezulu.
Sithatha izingxenye ezincane zenhlama - yenzelwe ama-chocolates angu-10 futhi sakha amabhola ukwethula kuwo ngamunye wabo i-hazelnut uma sifuna.
Ngemuva nquma ama-alimondi athosiwe ukuze kube khona izingcezu ezincane zokugqoka oshokoledi kuzo.
Uma usuqedile sithatha oshokoledi siye efrijini ukuze ziqine sisalungisa ukugeza.
Ukuze wenze lokhu, sincibilikisa ushokoledi namafutha ku-microwave ngezikhathi zemizuzwana engu-20-30 ukuze ingashi.
Uma sinoshokoledi ocibilikile, sithatha amabhola efrijini futhi siwageza ngoshokoledi oncibilikile. Ungakwenza lokhu ngokuwabeka endaweni yokubeka phezu kwethreyi elincane bese uphonsa ushokoledi phezulu.
Sivumela ushokoledi owedlulele udonse bese sibabeka epuletini noma ethreyini ngephepha elingenawo amafutha futhi sithatha siye esiqandisini okungenani imizuzu eyi-15.
Manje kusele kuphela ukujabulela amabhonbhoni we-almond kanye noshokoledi omnyama.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Ama-Postres » Amabhoni kashokoledi we-almond kanye nomnyama